20 September, 2017 in Maqaallo by BANA Mogdishu Office
Falanqeyn iyo wada tashi dheer ka dib maamulka NBB wuxuu isla gartay qaabka ugu macquulsan ee wax looga qaban karo xanuunka walaalkeen Af-Yaal Hassan Huburow waana sidatan:
Waa sidee xannuunka haya Hassan Huburow?
Hassan waxaa uu mudda la xanuunsanaa cudurka kaadi macaanta (Diabetes), laakiin wuxuu ahaa nin iska ordo oo nolol maalmeedkiisa soo dhacsado.
Muddo dhowr bilood ka hor waxaa soo dhul dhigay xannuun xagga dhabarka ah ( Lumbar radiculopathy- Sciatica) oo u diiday socod iyo hurdo.
Sidee wax looga qaban karaa?
Waxaan isla garanay in xaaladiisa caafimaad aan dalka wax looga qaban karin.
Waxaan ku talinay (baaritaan dheer ka dib) in Af-Yaal Hassan Huburow loo qaado dalka India si loogu soo daaweeyo.
Maxaa loo baahan yahay?
Hassan wuxuu u baahan yahay in Passport loo sameeyo. Warqad ka warbixineyso xannuunkiisa in la helo si loogu soo dalbo Visaha dal ku galka ee India.
Arrinta Visaha waxaa naga caawin doono oo balanqaaday walaalkeen Hassan oo ka shaqeeya safaaradda Soomaaliya ee India. Wuxuu kaloo noo balan qaaday meeshii uu seexan lahaa iyo diyaarinta balamada isbitaalka, ka caawinta xagga luqadda iwm
Waxaan u xilsaarnay walaalkeen Abdallah Sharif Ahmed, qabashada lacagaha deeqda ee loogu talogalay taakulaynta Abwaanka, passport u sameynta, jaridda tikidhka iyo soo ambabixinta Abwaan Hassan Huburow.
Waxaa hadda deg-deg loogu baahan yahay $8000 (siddeed kun oo dollar). Sidaa darteed anigoo ku hadlaya codka Af-Yaal Hassan Nur Mohamed (Huburow) idinka ka codsanayaa in aan loo kala harin taakuleynta walaalkeen (Oggaada adduun unbaa walaal lagu yahay).
Waxaan rabnaa inaan barnaamijkaas kor ku xusan ku soo gaba gabeyno muddo Afar toddobaad ah oo maanta ka bilaabato kuna eg 19/10/2017.
FADLAN KU HAGAAJI DEEQDIINA
ABDALLAH SHARIF AHMED: +252 612080808
Dr Aweys Abdi Omar
Aasaasaha ahna Madaxa Naadiga NBB
"Sawirro"GuddoomiyeTaabit Oo Soo Xiray Barnaamijka Aminiga Iyo Hormarinta Caasimadda
"Sawiro"Ra'iisul Wasaaraha oo ka qeyb galay Kulan looga hadlayay Taakuleynta Ciidamada
Sawiro:- Maamulka Gobolka Banaadir oo Soo bandhigayo Barnaamijka (Made In Xamar)
Sawirro:- Banaanbaxyo Faragilinta DF loogu soo horjeedo oo ka dhacay Lix degmo!! Visits: 147
Saddex Ruux oo Muqdisho lagu dilay iyo Amniga oo faraha ka baxay! Visits: 57
DEG DEG:-Waqtiga ay dhaceyso doorashada KGS oo la shaaciyay Visits: 215